Ruoko Runoshamisa rweOctopus | Zvakangoitika Zvega Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Belize Kriol Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kiluba Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba
Ruoko Runoshamisa rweOctopus
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ruoko Runoshamisa rweOctopus
Mainjiniya anoita zvekugadzira marobhoti ari kugadzira michina inobatsira vanachiremba kuti vakwanise kuvhiya vachishandisa nzira dzinoita kuti vasacheka pakakura. Pane muchina wavakagadzira wakabva pakuongorora ruoko rweoctopus.
Chimbofunga izvi: Octopus inokwanisa kubata uye kudzvanya zvinhu nemaoko ayo 8. Maoko acho anokwanisa kutatamuka uye kuzvonyongoka kunyange munzvimbo dzakamanikana. Inogona kubhendesa maoko acho kuti atarise kwainenge ichida uye inokwanisawo kuomesa zvimwe zvikamu zveruoko sezvinenge zvichidiwa.
Vanotsvakurudza vanoti kana kukagadzirwa robhoti rinenge riine ruoko rwakapfava uye runogona kuzvonyongoka sezvinoita rweoctopus, zvinogona kubatsira pakuvhiya asi munhu asingachekwi pakakura. Michina yakadai inogona kubatsira varwere vanenge vachifanira kuvhiyiwa pakakura.
Ona vhidhiyo yekuzvonyongoka kunoita maoko eoctopus
Pane ruoko rwakadaro rwakatogadzirwa, uye ruchiri kumboshandiswa pakuvhiya kwekuedzesera kunoitwa nemakombiyuta. Chimwe chikamu cheruoko rwacho chakareba 135 mm uye chinogona kusimudza nhengo dzemumuviri chisingadzikuvadzi, uku chimwe chikamu cheruoko chichivhiya. Muzvinadzidzo anonzi Tommaso Ranzani, uyo akashandawo pakugadzira muchina wacho akataura kuti, “tinovimba kuti kugadzira kwataita muchina uyu anongova mavambo, asi uchazoita uchivandudzwa.”
Kana pakagadzirwa ruoko rwerobhoti rwakapfava uye rwunokwanisa kupinda pakawanda rwungazobatsira chaizvo pakuvhiya
Unofungei? Ruoko rweoctopus rwakangoerekana rwavapo here kana kuti rwakasikwa?
Massimo Tistarelli: Nyanzvi yeRobotics Inotsanangura Kutenda Kwayo